မ​ရေး​ဖြစ်​တာ​ကြာ​ပြီ​ဖြစ်​တဲ့ ​စ​ကား​လုံး​များ ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
​ကျွန်​တော် ​ဘယ်​လောက်​နေ​မ​ကောင်း​ကောင်း ​ပို့စ်​တစ်​ပုဒ်​တော့ ​တင်​ဖြစ်​အောင်​တင်​ပါ​တယ် . ​ဝဘ်​ဆိုက်​ပဲ ​လုပ်​နေ​လို့​လဲ ​ဘေး​က ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​က ​မျက်​စောင်း​ထိုး​လှ​ပြီ . ​ထိုး​မှာ​ပေါ့ . ​ကျွန်​တော်​က ​အ​ပေါင်း​အ​သင်း​မဲ့​တဲ့ ​အ​ထီး​ကျန်​သ​မား​တစ်​ယောက်​လို ​ဖြစ်​နေ​တာ​လေ . ​မိုး​လင်း​က ​မိုး​ချုပ် ​ပို့စ်​တင်​ဖို့ .. ​ဖိုင်​တွေ​တင်​ဖို့​လောက်​ပဲ ​သိ​တဲ့​ကောင်​ကိုး . ​လူ​မှု​ရေး​ဆို​တာ ​အ​ခု​အ​ချိန်​မှာ ​ကျွန်​တော်​နဲ့ ​မ​ဆိုင်​သ​လို​ပါ​ပဲ .. ​အ​ချိန်​တွေ​ကြာ​လာ​တာ​နဲ့ ​ကျွန်​တော် ​ကွန်​ပျူ​တာ​နား​က​နေ ​မ​ထ​ချင်​တော့​ဘူး .. ​နေ့​စဉ်​နဲ့​အ​မျှ ​မိုး​လင်း​က​မိုး​ချုပ် ​ကွန်​ပျူ​တာ​နဲ့ ​န​ဘန်း​လုံး​နေ​ရ​ပေ​မယ့် ​ဒီ​အ​လုပ်​ကို ​စိတ်​မ​ကုန်​သွား​ဘူး .. ​မော​နေ​ရင် ​ကျွန်​တော် ​ဒီ​ဘ​လောဂ်​လေး​ကို​လာ ​စီ​ဘောက်စ်​မှာ ​ဘယ်​သူ​တွေ​အော်​ခဲ့​လဲ ​ကြည့်​လိုက်​ရင် ​အ​မော​ပြော​သွား​တယ် . ​ကျွန်​တော် ​ထိုင်း​မှာ ​ရောက်​နေ​တုန်း​အ​ချိန်​တွေ​မှာ​သာ ​ဖိုင်​တွေ​ကို ​အ​များ​ကြီး​တင်​နိုင်၊ ​မျှေ​ဝ​နိုင်​မှာ​ပါ .. ​မြန်​မာ​ပြည်​ရောက်​ရင် ​ကွန်​ပျူ​တာ ​သုံး​နိုင်​ပေ​မယ့် ​အင်​တာ​နက်​သုံး​ဖို့​က ​သိ​တဲ့​အ​တိုင်း​ပဲ​လေ . ​ကျွန်​တော်​ဘ​ဝ​ကြီး​ကို ​ဟိုး​အ​ရင်​လွန်​ခဲ့​တဲ့ ​ရ ​ကျော်​လောက်​က​တည်း​က​သာ ​အ​ခု​လို ​အင်​တာ​နက်​ကို ​စိတ်​ကြိုက်​သုံး​စွဲ​ခွင့်​ရ​ခဲ့​မယ်​ဆို . ​အ​ခု​ထက်​အ​ထိ ​သူ​ငယ်​ချင်း​တွေ​ကို ​အ​ကျိုး​ပြု​နိုင်​မှာ​ပါ . ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​အ​ချိန်​ဆို​တာ ​ကို​က ​အ​ကျိုး​ရှိ​ရှိ ​အ​သုံး​ချ​တတ်​ရင် ​ကို့​အ​တွက် ​နောင်​တစ်​ချိန်​မှာ​တိုး​တက်​မှု​တွေ​နဲ့ ​နီး​စပ်​ခွင့် ​ထိ​တွေ့​ခွင့်​ရ​မှာ​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​လွန်​ခဲ့​တဲ့ ၆ ​လ​ကျော် ​ရ ​လ​လောက်​က​တည်း​က chatting ​ကို ​မ​ပြော​ဖြစ်​ခဲ့​တာ​ပါ ... ​တစ်​ကယ်​တော့ ​ကျွန်​တော့် ​လိပ်​စာ​လေး​ကို​ပေး​ထား​တယ်​ဆို​တာ . ​မ​သိ​တာ​လေး​တွေ​ရှိ​ရင် ​မေး​မြန်း​လို့​ရ​အောင် ​တ​မင်​ပေး​ထား​တာ​ပါ . ​နာ​မည်​လဲ​မ​ကြီး​ချင်​ပါ​ဘူး .. ​ဟိုး​အ​ရင်​တုန်း​က ​တစ်​ခြား​ဆိုက်​တွေ​ကို ​လိုက်​လည်​ဖို့​အ​ချိန်​တွေ​ပေး​နိုင်​ပေ​မယ့် . ​အ​ခု​တော့ ​ကျွန်​တော့်​အ​တွက် ​အ​ပို​ချိန်​ဆို​တာ​ကို ​မ​ရှိ​သ​လောက်​ပါ​ပဲ . Google ​က​နေ ​လိုက်​ရှာ ​နောက်​ဆုံး​ပေါ်​ဆို​တာ​ကို ​သူ​များ​တွေ​ကို ​ငွေ​ကြေး​မ​ပေး​ပဲ ​သုံး​လို့​ရ​ဖို့​အ​တွက် ​ကျွန်​တော်​လိုက်​ပြီး ​ရှာ​ပါ​တယ် . ​ကျွန်​တော်​စု​ထား​တာ​လေး​တွေ​လဲ ​တင်​ပေး​သ​လို .. ​ထိုင်း​က​နေ ​ဝယ်​ထား​တာ​လေး​တွေ​ကို​လဲ ​တင်​ပေး​ပါ​တယ် . ​အ​များ​အား​ဖြင့်​တော့ ​နိုင်​ငံ​ခြား​သား​တွေ​ဆီ​က​နေ ​ရ​လာ​တာ​ပါ .. ​ကျွန်​တော့်​ဆိုက်​ထဲ​မှာ ​ရှိ​တဲ့ ​ဘယ်​ပို့စ်​ကို​မ​ဆို ​ဝေ​ဖန်​သွား​လို့​ရ​ပါ​တယ် . ​အ​ကောင်း​ဆုံး​စ​ကား​တစ်​ခွန်း​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော်​ပြော​ပြ​ချင်​ပါ​တယ် ... ​ဘ​လောဂ်​မ​ရေး​တတ်​ရင်​လဲ ​ကျွန်​တော် ​လမ်း​ညွှန်​ပေး​ပါ​တယ် . ​ပြော​ပြ​ပါ​တယ် . ​ဘ​လောဂ်​အိမ်​လေး​ဖြစ်​လာ​ဖို့​လွယ်​ပေ​မယ့် . ​မွေး​ဖွား​လာ​တဲ့ ​ကိုယ့်​ရဲ့ ​ဘ​လောဂ်​လေး​ဟာ ​သန့်​သန့်​ရှင်း​ရှင်း​နဲ့ ၊ ​ဖြူ​ဖြူ​စင်​စင်​လေး​ရှိ​မယ်။ ​အေး​ချမ်း​နေ​မယ်​ဆို​ရင် ​မေ​တ္တာ​တ​ရား​ဆို​တာ ​ကိုယ့်​ဆီ​ကို ​နွေး​နွေး​ထွေး​ထွေး​နဲ့ ​ကြို​ဆို​နေ​တာ​ပါ . ​ကျွန်​တော် ​ညီ​မ​လေး​တစ်​ယောက်​ကို ​ပြော​ခဲ့​ဖူး​ပါ​တယ် .. mydiary ​ဆို​တဲ့ ​ညီ​မ​လေး​ပါ . ​လူ​ကို​မ​မြင်​ဖူး​သ​လို . ​စ​ကား​တောင် ​မ​ပြော​ဖူး​ပါ​ဘူး . ​သူ့​ဆိုက်​လေး​မှာ ​ရေး​ထား​တာ​လေး​ကို ​ကျွန်​တော်​က ​ဆွေး​နွေး​ပေး​တာ​လောက်​ပါ . ​သူ့​ဆိုက်​ထဲ​မှာ​က ​စီ​ဘောက်စ်​ဆို​တာ ​မ​လို​သ​လို . nero counter ​လို ​လူ​ဘယ်​နှစ်​ယောက်​လာ​လည်​တယ်​ဆို​တာ​လဲ ​မ​လို​ပါ​ဘူး​လို့ ​ရေး​ထား​တဲ့​ပို့စ်​လေး​ကို ​ကျွန်​တော်​ပြော​ခဲ့​ပါ​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တော့ ​အ​ပြင်​ပမ်း​ကြည့်​ရင် ​မ​လို​အပ်​ပါ​ဘူး​လို့ .. ​ဒါ​ပေ​မယ့် ​ဘ​လောဂ်​ရေး​တဲ့​သူ​တိုင်း ​ကိုယ့်​ဘ​လောဂ်​ကို ​လာ​လည်​စေ​ချင်​တာ . ​ကိုယ့်​ရဲ့​အ​နု​ပ​ညာ​ကို ​ခံ​စား​စေ​ချင်​တာ၊ ​ကိုယ်​သိ​တဲ့​အ​သိ​ပ​ညာ​ကို ​သိ​စေ​ချင်​တာ၊ ​ဝေ​မျှ​ချင်​တာ​တွေ​ဟာ ​လူ​တိုင်း​မှာ ​ရှိ​ပါ​တယ် ... ​အဲ့​ဒီ့​တော့ ​ကို​ဘ​လောဂ်​လေး​ကို​ဖွင့်​လိုက်​ရင် ​လာ​လည်​တဲ့​သူ​တွေ ​တိုး​လာ​တာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ်၊ ​ကိုယ်​စီ​ဘောက်စ်​မှာ​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​တစ်​ခု​ခု​ရေး​ခဲ့​ရင် ​ရင်​ထဲ​မှာ ​ဘယ်​လို​မှ ​ဖော်​ပြ​လို့​မ​ရ​တဲ့ ​ပီ​တိ​ကို ​ဖြစ်​ပေါ်​စေ​ပါ​တယ် .. ​ကျွန်​တော့်​စီ​ဘောက်စ်​မှာ ​လေး​လေး​စား​စား​နဲ့​ပြော​ခဲ့​တဲ့​သူ​တိုင်း​ကို ​ကျွန်​တော်​လေး​လေး​စား​စား​နဲ့ ​အ​ကောင်း​ဆုံး​အ​ဖြေ​တွေ​ကို ​ပေး​ခဲ့​တာ​ချည်း​ပါ​ပဲ . ​တစ်​ချို့​မေး​ခွန်း​တွေ​ကို ​ကျွန်​တော်​ဖြေ​ဖို့ ​မ​တိ​ကျ​တိုင်း Google ​ကို​အား​ကို​ပြီး​ရှာ၊ ​လိုက်​ဖတ်​ပြီး​မှ ​အ​ဖြေ​ကို​ပေး​တာ​ချည်း​ပါ​ပဲ .. ​ဘယ်​လို​ပဲ​ဖြစ်​ဖြစ် ​ကိုယ့်​စီ​ဘောက်​ကို​လာ​လည်​ပြီး​ရေး​ခဲ့​တိုင်း ​ရ​လိုက်​တဲ့​ပီ​တိ​က ​အ​ရမ်း​ကို​ကြည်​နူး​ဖို့​ကောင်း​ပါ​တယ် . ​အဲ့​ဒီ့​လို​ကျွန်​တော်​ပြော​လိုက်​လို့ ​အဲ့​ဒီ့​ညီ​မ​လေး​လဲ ​စီ​ဘောက်စ်​ထည့်​ဖြစ်​သွား​တာ​နေ​မယ်​ထင်​ပါ​တယ် . ​တစ်​ကယ်​တော့ ​ကျွန်​တော်​စာ​ရေး​တာ ​အ​လွန်​နဲ​ပါ​တယ် . ​ဒီ​နေ့​တော့ ​စိတ်​ထဲ​မှာ ​တစ်​မျိုး​ဖြစ်​လာ​တာ​နဲ့ ​ရေး​ဖြစ်​သွား​တာ​ပါ ...
Angel Shaper July 16, 2009 at 5:22 AM
​အ​ကို​စာ​ရေး​နဲ​ပေ​မယ့် ​ဖတ်​လို့​ကောင်း​အောင်​ရေး​ထား​သ​လို၊ ​သ​မီး​တို့​လို ​ဘာ​မှ​မ​သိ​တဲ့ ​သူ​တွေ​အ​တွက် ​အ​ကူ​အ​ညီ​အ​များ​ကြီး​ပေး​တယ်​လေ။
​ဆက်​ရေး​ပါ၊ ​ဆက်​တင်​ပါ၊ ​အား​ပေး​နေ​တယ်။